JPMorgan Archives-Funda ukurhweba
Uqikelelo lweJPMorgan lweXabiso leNtsingiselo yokuCebisa iBitcoin ayixatyiswanga
Ukuhlaziywa: 28 May 2020
Kanye xa abaninzi bevuma ukuba ixabiso leBitcoin linqongophele kwaye liya kuba phezulu kunangoku, ayingabo bonke abacinga njalo. Ixabiso leBitcoin lilungile apho kufanele ukuba libe khona, ngokweenkampani zebhanki zamanye amazwe kunye nenkonzo yezezimali iJPMorgan Chase.
I-JPM igcina ukuba iBitcoin inexabiso elifanelekileyo ngokusekwe kumlinganiso 'wexabiso langaphakathi', kwanasemva kwetyala elisandula ukwenziwa. Yenziwe ngumhlalutyi we-JP Morgan uNick Panigirtzoglou, uqikelelo ngokuyintloko luthathela ingqalelo izinto ezimbini-inkcitho yemigodi yeBitcoin kunye nexabiso langoku lemarike.
Uqikelelo olusekwe kwixabiso langaphakathi, iBitcoin yayijongelwe phantsi ngaphambi kwesiqingatha. Ngoku ukusukela kwisiqingatha kukhokelele ekunyukeni kweendleko zemveliso, ixabiso langaphakathi likaBitcoin ngexabiso lilungile.
Ubudlelwane bexabiso lwangaphakathi lweBitcoin luhambelana nezinto ezimbini eziguquguqukayo ngokwe-JPM. Eyokuqala kukuba inqanaba le-hash yenethiwekhi liwile ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 kuba kukho ukhuphiswano oluphezulu kakhulu nolomeleleyo phakathi kwabavukuzi bemivuzo yebhloko.
Ukongeza, ngenxa yesiqingatha, inani elibalulekileyo labavukuzi beBitcoin liye laphinde lasebenza. Ngoku ekubeni imarike yomelele kakhulu, abasebenzi basezimayini abasese kwinethiwekhi kwaye abayigcinayo ngokufanelekileyo banokubonelela ngokusebenza ngcono.
I-JPMorgan's New Bitcoin Perception
Isigqeba esiyiNtloko uJamie Dimon wathi ngo-Septemba ngo-2017 ukuba uza kugxotha nabaphi na abasebenzi ababanjiweyo bethengisa i-BTC kuba yayisisidenge kwaye ichasene nomgaqo-nkqubo wenkampani.
Uphononongo lwamva nje lweJPMorgan kunye notshintsho olubalulekileyo ekubonakaleni kwe-bitcoin kuza emva kokutshintshiselana kwebhanki kwi-crypto njengabaxhasi beCoinbase kunye neGemini, becebisa ukuba kungaphela ixesha elinxamnye ne-crypto ebhankini.
Izilumkiso zeJPMorgan zoPhuculo loMthamo wemali yeDijithali kwiimpembelelo zaseMelika
Ukuhlaziywa: 22 May 2020
I-JPMorgan Chase & Co ilumkisa i-US ukuba ukuphazamiseka okunokwenzeka kwemali yedijithali kunokuchaphazela uqoqosho.
NgoLwesihlanu umhla we-22 kuCanzibe, abahlalutyi abasuka kwinkampani enkulu yotyalo-mali yamazwe aphesheya, uJPMorgan Chase, baxelele iBloomberg News ukuba "akukho lizwe elinokulahlekelwa ngaphezulu kwe-United States kumandla okuphazamisa imali yedijithali."
Ababhali besifundo baquka u-economist oyintloko wase-US u-Michael Feroli kunye no-JPMorgan, u-Josh Younger, oyintloko yeqhinga-nzala le-US.
Olu hlalutyo lubonisa ukuba nangona idola yaseMelika ingaqhubeka nokuhlala njengemali ebekelwe bucala, ezinye izinto "azizinzanga" Ezi ntsilelo zimbini ziindawo zokuhlala kurhwebo kunye nenkqubo yemiyalezo ye-SWIFT.
Kwi-2018, ulawulo lwase-US lusebenzise inkqubo yemiyalezo ye-SWIFT ukuthintela ukufikelela kwiintlawulo ezivela kwiibhanki ezithile zaseIran. Oku kudale iyantlukwano phakathi kwe-US ne-EU, eyimbumba. Ngelo xesha kwakuthathwa njengokunyhashwa komthetho we-EU.
Iingcali ziqikelela ukuba i-US ingaphulukana nobukhulu bayo behlabathi geopolitiki ukuba amazwe amaninzi afumene indlela ejikeleze i-SWIFT (umzekelo, ukusebenzisa i-crypto). Bagqibe ngelithi "Imali yedijithali ngumsebenzi kulawulo lomngcipheko we-geopolotiki kumazwe anengeniso ephezulu kwaye ngakumbi i-US"
Umyalezo ofanayo uvakalise uqoqosho lwe-ING ekuqaleni kuka-Matshi.
Kunqabile ukuba kunazo naziphi na iziphumo ezibi zoShishino lwezeMali
Kukho iimeko ezifanelekileyo zebhanki ephambili yokuphumeza iimali zedijithali, ngokukaJP Morgan, kodwa akunakubakho ziphumo zibi.
Ibhanki ikwacinga ukuba ulawulo lwedola yaseMelika kwihlabathi liphela alunakubhukuqwa kwangoko, ezona ndawo ziphambili zihlala "zingazinzanga."
Ukubonelela ngenkqubo yotshintshiselwano ngemali eyaphunyezwa ngaphezulu kwedola yedijithali iya kuba lutyalo-mali olulinganiselweyo, ngakumbi ukuba luyilelwe ukuba luchaphazele ubume benkqubo yezemali yasekhaya, ukukhusela eyona ndlela iphambili yendima yeprojekthi kuqoqosho lwehlabathi, ”utshilo isifundo .
tags Bitcoin, Bloomberg, Cryptocurrency, JPMorgan, Idola yaseMelika